Fundamentos De SEO Do Semalt Ou Como Melhorar Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe
Lapho ibhizinisi lendawo lamukela isiteji se-e-commerce, ngokuvamile kuvame isidingo esikhulu sokuheha amakhasimende ngaphakathi kwendawo. Ibhizinisi lendawo eliphumelelayo linamasu okuthengisa okungaxhunyiwe ku-intanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi, okuletha izinzuzo eziningi ohlelweni. Ngenxa yalolu daba, ukumaketha okuku-intanethi usebenzisa i-Search Engine Optimization elula (SEO) kusiza ekwenzeni amawebhusayithi isikhundla kwi-SERP, okwenza inqubo yonke izuze iqinile. Noma kunjalo, amacebo okuthengisa ase-intanethi ayenamandla kakhulu. Abasebenzisi kudingeka baqaphele isimo esingavamile samasu okuthengisa nge-digital. Isibonelo, indlela eyodwa ingasebenza manje kepha ibamba ukusebenza kamuva - gislaved nordfrost 100 rehvid pluss.
Igor Gamanenko, the Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, uye wachaza izindlela eziningana zokusesha izinjini ekubhekiseni amawebhusayithi:
I-SEO yendawo yodwa yokumaketha kwedijithali lapho ukubhekwa khona kwendawo kungendawo ethile. Njengoba ukwandisa isayithi lakho ukufaka okuqukethwe okuningi kwe-intanethi, kuhle ukukhathalela ukuthi iwebhusayithi enhle kufanele ifake amagama angukhiye afanele esihloko, incazelo ye-meta nomzimba wokuqukethwe.
I-Google Maps iyinye ithuluzi elibalulekile lokuvikela i-SEO yangakini. I-Google Imephu inenzuzo kulokhu kusiza iwebhusayithi yakho ukuba ibeke isikhundla. I-SEO yangakini igxile ekubandakeni izici ezifanele zendawo kanye nezindawo zabantu abatholakalayo ngenkathi kusetshenzwa ucwaningo lwegama elingukhiye kuyadingeka. Lawa angamagama angukhiye abhekana nomgwaqo ophelele kumakhasi akho wewebhu..
Ukuzenzakalela i-SEO yendawo:
Izici ze-SEO ziqale ukuzenzekelayo kusukela ekuqaleni kwe-SEO. Kukhona amapulatifomu e-intanethi ahlukahlukene aqukethe izici ezingenza i-SEO iguqule. Ngokuzenzekelayo, idatha yebhizinisi ingagcinwa kalula futhi ixhumanise iziteshi zokumaketha ngezindlela eziningi zokuhlaziya idatha.
Noma yimuphi inkampani efuna ukuphumelela ngokumaketha kwe-intanethi idinga ukwandisa iwebhusayithi yayo kumakhalekhukhwini. NgoJanuwari kulo nyaka, i-Google yamemezela ukuthi ukuphendula isayithi kumadivayisi eselula kungenye yezici abazoyisebenzisa ukubeka amawebhusayithi. Ngenxa yalokho, ukwandisa okuqukethwe kwakho kuwebhu ekusesheni kweselula kungaba yinto ebalulekile. Nge-SEO yangakini, amafoni angakwazi ukufinyelela kubantu abaningi basebenzisa amapulatifomu afana nemithombo yezokuxhumana.
I-Google Bhizinisi Lami:
I-Google ikhasi lebhizinisi lami lisiza amabhizinisi asendaweni enezinga lewebhusayithi kuma-search. Ukusebenzisa le akhawunti, umuntu angasebenzisa izithombe eziphezulu ukukhuthaza okuqukethwe kusayithi labo. Le nkampani ivela kumamephu weGoogle, okwandisa ithuba lokuba phakathi kwemiphumela ephezulu.
Noma yiliphi ibhizinisi eliku-inthanethi lidinga ukubonakala kwe-intanethi kuzinjini zokusesha kanye nasemapulatifomu afana nemithombo yezokuxhumana. Amaklayenti okukhangisa nge-Digital atholakale kulayini ngalezi zindlela ngenxa yemakethe enkulu etholakalayo kwi-intanethi yemisebenzi eminingi. I-SEO yasendaweni ihilela ukusebenzisa okuqukethwe kwendawo yewebhu kanye nokukhangisa okuhlosiwe nezinye iziteshi zokumaketha. Uma kuziwa kwi-SEO yendawo, kunamacebo amaningi umuntu angayisebenzisa futhi athole izinzuzo eziningi ezivela kubo. Umkhankaso wakho we-SEO wendawo kufanele uphumelele uma usebenzisa amathiphu angenhla ngokuhlakanipha.